05 SERVICES မော်ကွန်း - ထို rayhab
နေရပ်လိပ်စာ: DE Kontumazgart အဆိုပါ3- 90429 Nürnbergဖုန်းနံပါတ်: + 49-911 / 92 88 19-0 ဖက်စ်: + 49-911 / 92 88 19-79 E-Mail က: headquarters@can-cia.org အင်တာနက်ကို http: // www အဆိုပါ .C-cia.org ဆက်သွယ်ရန်: Frau အဒေါ့ဖ် 3.2.29 ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များကိုအလားတူအကျိုးစီးပွားမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြားအလိုအလျောက်စနစ်များ haberlermv ၏ဖြစ်နိုင်သည် [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: လိုင်ယွန် str ။ + 9-60528 / 49 69-66 ဖက်စ်: + 30-50 / 49 69-66 E-Mail က: - DE 30 Frankfurt အတွက် 5211 ပင်မဖုန်းဖြစ်ကြောင်းကို info@bs-card-service.co အင်တာနက်ကို http: // www ။ bs-card-service.co ဆက်သွယ်ရန်: Frau Susanne ဗန် Verre အလားတူအကျိုးစီးပွားမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြား haberlerexpress ဝန်ဆောင်မှု OOD ၏ဖြစ်နိုင်သည် [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Löhrst။ DE 91 - 56068 Koblenz ဖုန်းနံပါတ်: + 49 261 1005400 ဖက်စ်: + 49 261 1005409 E-Mail က: dialog@bpv-consult.net အငျတာနကျ: http://www.bpv-consult.net အလားတူအကျိုးစီးပွားမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြား haberlerpb- ၏ဖြစ်နိုင်သည် - Am Plärrer 23 DE: GmbH သည် 01 / 2010 / 12 လိပ်စာတိုင်ပင်ဆွေးနွေး [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: ရောဘတ်-Bosch ရဲ့-Allee DE 1 - 74232 Abstatt E-Mail က: အင်တာနက်ကို beg.rail@de.bosch.co: ငါ http://www.bosch-engineering.co ဆက်သွယ်ရန်: Herr Sascha Niemz အခြားဆက်စပ်သတင်းများနှင့်အကျိုးစီးပွားမီးရထား၏ဖြစ်နိုင်သည် haberlerbosch Rexroth 28 / 12 / 2010 လိပ်စာ: Partensteiner str ။ DE 23 - 97816 Lohr နံနက်ပင်မ [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Buschst ။ DE 8 - 53340 Meckenheim ဖုန်းနံပါတ်: + 49-2225 / 92 27-0 ဖက်စ်: + 49-2225 / 92 27-55 E-Mail က: bhcgummi-metal @ အချက်အလက်အင်တာနက်ကိုမှာ http: //www.bhcgummi-metall ။ ။ က de ဆက်သွယ်ရန်: 13 de ထံမှ Liechtersmat: Herr Udo Reichert အလားတူအကျိုးစီးပွားမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြား haberlergmt-Gummi-metal-Technik GmbH သည် 01 / 2010 /5လိပ်စာ၏ဖြစ်နိုင်သည် [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Erwin-ဗွန်-Kreibig-str ။ DE3- 80807 münchenဖုန်းနံပါတ်: + 49-89 / 60 80 90-0 ဖက်စ်: + 49-89 /609 81 82 E-Mail က: info@berner-mattner.co အင်တာနက်ကို http: //www.berner-mattn .com ကိုဆက်သွယ်ရန်: Frau Stephanie Herbst သတင်းများနှင့်အခြားဆက်စပ်ရထားလမ်း haberlera.st Angewandte Systemtechnik GmbH သည်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေခြင်းငှါ [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Holzmarktst ။ 15-17 DE - 10179 ဘာလင်ဖုန်းနံပါတ်: + 49-30 / 1 94 49 ဖက်စ်: + 49-30 / 25 64 92 56 E-mail ကို: bvg .: ဆက်သွယ်ပါ @ ယင်းအချက်အလက်ကိုအင်တာနက်: Frau Melanie Sander အလားတူမီးရထားသတင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေခြင်းငှါ အခြားအ haberlerbvo Verkehrsbetriebe Erzgebirge GmbH သည် 28 / 12 / 2010 [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Fasanenstr ။ DE 85 - 10623 ဘာလင်ဖုန်းနံပါတ်: + 49-30 /399 80-252 ဖက်စ်: + 49-30 /399 80-239 E-Mail က: berlin-မိတ်ဖက် @ messe အင်တာနက်ကို http: //www.businesslocationcent ။ ။ က de ဆက်သွယ်ရန်: Herr ဒါဝိဒ်သည် Blumenthal အလားတူအကျိုးစီးပွားမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြား haberlerenterpris ဥရောပကွန်ယက်ဘာလင်-Brandenburg အမည်ရှိသတို့သားက TSB ၏ဖြစ်နိုင်သည် [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Burchardst ။ DE 21 - 20095 ဟမ်းဘတ်ဖုန်းနံပါတ်: + 49-40 / 39 99 58-100 ဖက်စ်: + 49-40 / 39 99 58-111 E-Mail က: benex @ messe အငျတာနကျ: ဆက်သွယ်ရန် http: //www.benex ။ ။ Frau Kathrine Freist အလားတူမီးရထားသတင်းနှင့် B-mAX ဦးပိုင် GmbH သည် 21 / 12 / 2010 စိတ်ဝင်စားဖြစ်မည်အကြောင်းကတခြားသတင်း [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Bismarckstr ။ DE-11 13 - 50672 Cologne ဖုန်းနံပါတ်: ။ + 49-221 / 95 14 49-0 ဖက်စ်: + 49-221 / 95 14 49-20 E-Mail က: အင်ဖို @ beka အင်တာနက်ကိုမှာ http: //www.bek ရန်။ က de ဆက်သွယ်ရန်: Herr စတီဖင်Anemülအလားတူမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြား haberlerihal သတိပြုပါစိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်: လမ်းမကြီး Keep [ပို ... ]
နေရပ်လိပ်စာ: Garmisch str ။ 35 DE - 81373 münchenဖုန်းနံပါတ်: + 49-89 /419 99-0 ဖက်စ်: + 49-89 /419 99-270 E-Mail က: info@bbrail.co အငျတာနကျ: ဆက်သွယ်ရန်: သင့် Frau Petra Dahmer အလားတူမီးရထားသတင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုများ အခြားအ haberlerbalfo Beatty ရထားနှီးနှောဖလှယ်ပွဲဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ် [ပို ... ]
/ o ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးစင်တာ Ostbrandenburg GmbH က c Bahnstandort Frankfurt (Oder),
နေရပ်လိပ်စာ: Im Technologiepark 1 DE - 15236 Frankfurt (Oder) ဖုန်းနံပါတ်: + 49-335 /557-1300 ဖက်စ်: + 49-335 /557-1310 E-mail ကို: Frau Irina Kania: ettc .: ဆက်သွယ်ပါ @ ယင်းအချက်အလက်ကိုအင်တာနက် အလားတူအကျိုးစီးပွားမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြားဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ GmbH သည် haberlercent 30 / 12 / 2010 လိပ်စာ၏ဖြစ်နိုင်သည်: [ပို ... ]
Baden-Württembergအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Ges ။f။ int ။ ဦး wirtschaftlich ။ wissenschaft- lichen Zusammenarbeit mbH
နေရပ်လိပ်စာ: Willis-Bleicher-str ။ DE 19 - စတုဂတ်ဖုန်းအတွက် 70174: + 49-711 /227 87-0 ဖက်စ်: + 49-711 /227 87-22 E-Mail က: bw-i @ အချက်အလက်အင်တာနက်ကိုမှာ http: //www.bw- ။ ဗြဲဆက်သွယ်ရန်: Frau Jasmine Flechs ရထားသတင်းများ-Wurttemberg နှင့်အခြား haberlerba အကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်သည်အလားတူ, ပြည်နယ်အဝေးပြေးမှပို [ပို ... ]
AUCOTEC AG က
နေရပ်လိပ်စာ: Oldenburger Allee DE 24 - 30659 Hannover ဖုန်းနံပါတ်: + 49-511 / 61 03-0 ဖက်စ်: + 49-511 / 61 40 74 E-Mail က: info@aucotec.co အငျတာနကျ: ငါ http://www.aucotec.co ဆက်သွယ်ရန်: Andreas Schünemannတစ်ဦးချင်းစီထုတ်ကုန်အုပ်စုတစ်စု 3.2.34 ဂီယာသို့ပြောင်းပါ
AUCOTEAM GmbH သည်
နေရပ်လိပ်စာ: Storkower str ။ တစ်ဦးက DE 115 - 10407 ဘာလင်ဖုန်းနံပါတ်: + 49-30 /421 88-0 ဖက်စ်: + 49-30 /423 27 09 E-Mail က: aucoteam @ kbrandes အငျတာနကျ: ဆက်သွယ်ရန် http: //www.aucoteam ။ ။ B-mAX မှအကျိုးစီးပွားဖြစ်စေခြင်းငှါ Herr Karl-Heinz BRAND အလားတူမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြားသတင်း [ပို ... ]
ILF အတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာစာခြုပျနှင့်ထရေးဒင်း Co. , Ltd
ILF Consulting Engineering နညျးပညာကန်ထရိုက်စာချုပ်များနှင့် Trading Company LIMITED လိပ်စာ: Ahmet Rasim Sok က။ အဘယ်သူမျှမ: တူရကီတူရကီအတွက်ကြမ်းပြင် 11206550 Ankai ဖုန်းနံပါတ်: + 90 (312)441 37 00 ဖက်စ်: + 90 (312)441 78 43 [ပို ... ]
Zach Leiter-und Steigtechnik GmbH သည်
နေရပ်လိပ်စာ: Heidelberg str ။ DE 8 - 01189 Dresden ဖုန်းနံပါတ်: + 49-351 / 40 46 50 ဖက်စ်: + 49-351 /404 65 15 E-Mail က: info@zacher.biz အငျတာနကျ: http://www.zacher.biz ဆက်သွယ်ရန်: Frau Katja သတင်းနှင့် Haller GmbH သည်အကျိုးစီးပွားhaberlergünzburg Steigtechnik ၏ဖြစ်နိုင်သည်အခြားဆက်စပ်ရထားလမ်း [ပို ... ]
Ltd. , Yashima Co. ,
နေရပ်လိပ်စာ: 6F 1-6-1, Hatchobori JP - တိုကျိုဖုန်း 104-0032 Chuo-Ku, + 81-3 / 55 41-3371 ဖက်စ်: + 81-3 / 55 41-3376 E-Mail က: k-andon အဆိုပါ @ yashima-co.co.jp အငျတာနကျ: http://www.yashima-co.co.jp ဆက်သွယ်ရန်: Herr Kentaro Kobayashi 3.2.40 Connectors နှင့်အခြားဆက်စပ်သတင်းများမီးရထား Solutions haberleracs ဆွစ်ဇာလန်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေခြင်းငှါ [ပို ... ]
WTZ Roßlau GmbH သည် und Maschinenforschung များအတွက် Motoren-
နေရပ်လိပ်စာ:2မှ DE Mühlenreih - 06862 Dessau-Roßlauဖုန်းနံပါတ်: + 49-34901 / 8 83-0 ဖက်စ်: + 49-34901 / 8 83-120 E-Mail က: wtz @ အချက်အလက်အင်တာနက်ကိုမှာ http: //www.wtz ။ ။ တစ်ဦးကိုဆက်သွယ်ရန်: Frau အီဗလီန်တျအလားတူအကျိုးစီးပွားမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြားhaberleraddıtıv Soft- und ဟာ့ဒ်ဝဲသားမွေး Technik und ၏ဖြစ်နိုင်သည် [ပို ... ]
ဆင်ခြေဖုံးရထားလမ်း Windhoff und Anlagentechnik GmbH ကတည်းက
နေရပ်လိပ်စာ: Hovest ။ DE 10 - 48431 Rheine ဖုန်းနံပါတ်: + 49-5971 / 580ဖက်စ်: + 49-5971 / 58 209 E-Mail က: windhoff @ အချက်အလက်အင်တာနက်ကို http: //www.windhoff ဆက်သွယ်ရန်အတွက်: Frau အင်ယာ Wersching 6.3.22 လမ်း။ ။ မော်တော်ယာဉ်များ -rail 6.5.35 သတင်းများအတွက်အလားတူရထားလမ်း Marshall ပစ္စည်းကိရိယာများအကျိုးစီးပွားနှင့်အခြား haberlereurasiarail ၏ဖြစ်နိုင်သည် [ပို ... ]
Wilhelm GmbH သည်Wißmann
နေရပ်လိပ်စာ: Kapellenweg DE 91 - 46514 Schermbeck ဖုန်းနံပါတ်: + 49-2853 / 91 340ဖက်စ်: + 49-2853 / 91 34 29 E-Mail က: အင်ဖို @ wissmann-အွန်လိုင်းအင်တာနက်ပေါ်တွင်မှာ http: //www.wissmann-onl ရန်။ ။ တစ်ဦးကိုဆက်သွယ်ရန်: Herr Bernhard Wißmannသတင်းနှင့်ယနေ့တွင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်သည် haberlertarih အခြားဆက်စပ်ရထားလမ်း: အောက်တိုဘာလ 18 [ပို ... ]
Wagon ဆန်းစစ်မှု Co. ,
လိပ်စာ: အမှတ် 520 Taleghani ရိပ်သာ မှာ IR - 1416893881 Teheran ဖုန်းနံပါတ်: + 98-21 / 66 41 87 50 ဖက်စ်: + 98-21 / 66 41 87 51 E-Mail က: info@wagonpars.co အငျတာနကျ: ငါဆက်သွယ်ပါ http://www.wagonpars.co: Herr Mohsen Abbasi အလားတူအကျိုးစီးပွားမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြား haberlerpars ၏ဖြစ်နိုင်သည် [ပို ... ]
Výzkumnýústav ?? eleznicníအဖြစ်
နေရပ်လိပ်စာ: Novodvorskaya CZ 1698 - 142 01 ပရာ့ဂ်ဖုန်းနံပါတ်: + 420-972 / 22 32 71 ဖက်စ်: + 420-241 / 49 41 86 E-Mail က: gruzovaj@cdvuz.cz အငျတာနကျ: http://www.cdvuz.cz ကိုဆက်သွယ်ပါ Frau Jitka GRUZOV မှ
နေရပ်လိပ်စာ: 1314 / 8 CZ မှ Bucharov - Praha 158 005ဖုန်းနံပါတ်: + 420-251 / 11 34 01 ဖက်စ်: + 420-251 / 11 34 98 E-Mail က: info@vukv.cz အင်တာနက်ကို http: //www.vukv .cz ဆက်သွယ်ရန်: Herr ဇန်နဝါရီ lutra
Vossloh စွဲစေစနစ်များ GmbH သည်
နေရပ်လိပ်စာ: Vosslohst ။ DE4- 58791 Werdohl ဖုန်းနံပါတ်: + 49-2392 / 52-0 ဖက်စ်: + 49-2392 / 52-375 E-Mail က: info@vfs.vossloh.co အင်တာနက်ကို http: //www.vossloh-fastening-systems ။ com ဆက်သွယ်ရန်: သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက် Frau စန်ဒရာ Brandt 6.5.48 အထူးထုတ်ကုန်များနှင့်အကျိုးစီးပွားအခြားဆက်စပ်သတင်းများမီးရထား Zhongbo haberlertaicang ၏ဖြစ်နိုင်သည် [ပို ... ]
အမြင့်မြန်နှုန်းရထားပေါ်တွင် xnumxth World Congress တွင်
လိပ်စာ: အမှတ်2Daliushu လမ်း, Haidian ခရိုင် CN - 100081 ဘေဂျင်းဖုန်းနံပါတ်: + 86-10 / 51 84 96 32 ဖက်စ်: + 89-10 / 62 24 50 22 E-Mail က: အင်တာနက်ကို wj@uic-highspeedxnumx.com.cn မှာ http: / /www.uic-highspeedxnumx.com.cn ဆက်သွယ်ရန်: Frau Katharina ဟောင်ကောင်နှင့်အလားတူအကျိုးစီးပွားမီးရထားသတင်းဖြစ်နိုင်သည် [ပို ... ]
3 Deutschland GmbH သည်
နေရပ်လိပ်စာ: Carl-Schurz-str ။ DE 1 - 41453 Neuss ဖုန်းနံပါတ်: + 49-2131 / 14-0 ဖက်စ်: + 49-2131 / 14-2649 E-Mail က: xnumxmtransportationsolutions.eu@mmm.co အငျတာနကျ: http://www.xnumxm.com/uk/ ရထားလမ်းဆက်သွယ်ပါ: Herr သောမတ်စ် Heinrich သတင်းနှင့် Deutschland GmbH သည်အကျိုးစီးပွား3/3/ 10 လိပ်စာ၏ဖြစ်နိုင်သည်အခြားဆက်စပ်ရထားလမ်း haberlereads: DE - Friedrichshafen 01 [ပို ... ]